ငါ Kent အတွက်အချိန်ပိုင်းခရီးစဉ်လမ်းညွှန်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်။ ဘလော့ဂ်. သူမ၏အကြိုက်ဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့လှုပ်ရှားမှုသည် Bristol ၏အနောက်တောင်ဘက်ကမ်းခြေသို့လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းဖြစ်သည်. သူမသည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ဘဝပုံစံကိုထောက်ခံသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးတစ်နေ့နေ့တွင်ထိုစာအုပ်အကြောင်းရေးသားရန်မျှော်လင့်သည်. သူမသည်သူမ၏မိဘများနှင့် Coco အမည်ရှိ Frenchie နှင့်အတူနေထိုင်သည် - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ